Global Voices teny Malagasy » Japana: Mampiketrona ny fiakaran’i Sina ho laharana faharoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Septambra 2010 10:52 GMT 1	 · Mpanoratra Scilla Alecci Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Shina, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna
Nanaiky ny Governemanta Japoney tamin'ity volana ity fa lasan'i Sina ny amboarany  [en] ka lasa izy no hery ara-toe-karena faharoa matanjaka indrindra aorian'i Etazonia, satria dia nampiseho ny antontan'isa ofisialy fa US$1,28 miliara ny fiharian-karem-pirenen'i Japana tao anatin'ny telo volana raha US$1,33 miliara kosa ny an'i Sina.
Ampontan, ohatra, mampandre  fa ny fiakaran'ny toe-karen'i Sina ho laharana faharoa dia tsy inona akory fa ebon-drano izay hipoaka ihany amin'ny farany.
Tahaka ny nomarihan'i Gordon Chang ao amin'ny Forbes  [en], lasa ebon-drano mavesatra eo ampovoan-trano ny tsenam-pandraharahana resaka trano Sinoa. Rehefa mipoaka izany–ary fantatrao fa hitranga izany– dia hanovo ron-tsaramaso betsaka ny mpamatsy vola ka ho difotry ny tantara isan-karazany mandritra ny 24 ora ao anatin'ny fito andro ny gazety isan-karazany.
Ny “fahagagana ekonomika” tahaka ny hamaritan'ireo manam-pahaizana sasany azy  [en] dia noho ny antony maro samihafa ka anisan'izany ireo fanavaozana taorian'ny ady sy ny fananganana tao-zava-baventy notohanan'ny ‘keiretsu ’ [en], mpanohana ny Governemanta sy indostria tsy miankina amin'ny fanjakana.
Ankehitriny i Japana, miaraka amin'ny mponiny izay ampahafolon'ny an'i Sina, dia ananana trosam-panjakana eo ho eo amin'ny 200% -n'ny Famokaram-bokatra anatiny  amin'ny fitomboana ekonomika tsy mihoatra ny 0.1%.
Mihevitra  i Takaojisan fa tsy mahagaga ny fisongonan'ny famokram-bokatra anatin'i Sina an'i Japana satria betsaka ny mponina ao aminy. Kanefa dia miombon-kevitra amin'i Ampontan ihany koa fa mety ho lasa setroka ihany izany tantara mikasika an'i Sina ho lasa hery ara-toe-karena lehibe indrindra izany rahampitso.
Ho fanampin'ireo isa izay manamarina ny hatsaran'ny ekonomian'i Sina mihoatra ny an'i Japana, ireo manam-pahaizana maminaviana  [en] fa ity fitomboam-pahefana ity dia mety hihoatra an'i Etazonia amin'ny taona 2030, ka hahalasa azy ho ekonomia lehibe indrindra eran-tany.
Manontany tena  ny mpitoraka blaogy aen_ukon99 hoe inona ireo antony jeren'ireo manam-pahaizana rehefa mandinika ny ekonomian'ny firenena iray izy ireo.
Ireo mpihevitra hafa amin'ny lafiny tsara, tahaka an'i Bos , dia nandray ireo vaovao ho tahaka ny anton'ny fandrosoana sy ny fanampiana ny firenen'izy ireo hampiasa ireo haja sy fanamafisana ireo mba hahatonga azy ho herin'izao tontolo izao amin'ny folo taona ho avy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/09/02/8683/
 lasan'i Sina ny amboarany: https://globalvoicesonline.org/2010/08/16/china-gdp-rising-public-spending-too/
 manam-pahaizana sasany azy: http://www.thefreelibrary.com/Japan+Since+1945:+The+Rise+of+an+Economic+Superpower.-a019273208
 trosam-panjakana eo ho eo amin'ny 200%: http://www.globaleconomiccrisis.com/blog/archives/1084
 ireo manam-pahaizana maminaviana: http://www.nytimes.com/2010/08/16/business/global/16yuan.html
 Manontany tena: http://blogs.yahoo.co.jp/aen_ukon99/32827405.html